पिसीआर परीक्षणमा धेरै रकम असुल्ने चितवनका दुई अस्पतालाई कारबाही
By administrator on	 December 16, 2020 देश, स्थानीय, स्वास्थ्य/जीवनशैली/यौन
चितवन, पुष १ । नेपाल सरकारले तोकेको पीसीआर परीक्षण शुल्क भन्दा बढि रकम असुलेका चितवनका दुई अस्पताललाई कारवाही गरिएको छ ।
रु. २ हजारमा पीसीआर परीक्षण गर्न सरकारले भनेपनि नियम अटेर गरी आफूखुशी उनीहरुले रु. ५०० बढि रकम असुल गरेको उजुरी प्रमाण सहित दर्ता भएपछि अनुसन्धान थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ ।
बढी रकम लिएका क्यान्सर अस्पताल भरतपुर र चितवन मेडिकल कलेजलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले कारबाही गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । दुवै अस्पताललाई कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, २०३२ अनुसार मुद्दा दर्ता गरेर कारवाही शुरू गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूसँग बयान समेत लिएको थियो ।
प्रशासनले क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. देजकुमार गौतमलाई थप अनुसन्धानका लागि पुर्पक्षमा राख्न आदेश दिएको थियो त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईको आदेशसँगै उनी आठ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर तारेखमा रिहा भएका थिए ।
प्रशासनले दुई साताअघि चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुसँग पनि बयान लिएको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले उनीहरू रु १८ लाख धरौटी राखेर तारेखमा रिहा भएको जानकारी दिनुभयो ।